Askari Mareykan ah laguna dilay Soomaaliya oo loogu magac darayo xarun caafimaad - Awdinle Online
Askari Mareykan ah laguna dilay Soomaaliya oo loogu magac darayo xarun caafimaad
November 9, 2019 (AO) – Xildhibaannada aqalka sare iyo aqalka hoose ee dalka Mareykanka ku matala Gobolka Arizona ayaa isku raacay in magaca laga beddelo xarunta caafimaadka ee lagu daweeyo halyeeyayada Mareykanka ee ku taalla Gobolka Arizona.
Martha McSally, iyo R-Ariz oo ka tirsan Aqalka sare ee Mareykanka iyo Andy Biggs oo ka tirsan aqalka hoose ayaa saxiixay sharci magaca looga beddelayo xarun caafimaad oo lagu daweeyo halyeeyada Ciidanka Mareykanka .
Xildhibaannada ayaa isku raacay in waddadaas loogu magaca daro Alexander Conrad,oo 8dii June 2018 lagu dilay Koofurta Soomaaliya markii goob ay ku sugnaayeen uu ku dhacay Madfac ay ku rideen Al shabab.
Alexander Conrad,oo 26 jir ahaa ayaa waxaa laba jeer loo diray dalka Afghanistan,waxa uu la dagaallamay Daalibaan,waxaana kaddib loo soo diray Soomaaliya si uu ula dagaallamo faraca Al Qaacidda ee Soomaaliya,hayeeshee gacantooda ayuu ku baxay.
Ehelkiisa, saaxiibadiis iyo dadka degaanka ayaa aad u soo dhaweeyay aragtida Xildhibaannada Mareykanka,waxaana ay ku baaqeen in qof kasta oo u dhinta difaaca dadka Mareykanka loo sameeyo maamuus gaar ah.
Previous articleAugustine Magnus Kailie oo loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska amison
Next articleWasiiro Itoobiyaan ah oo Muqdisho Imaanaya Maalinta Beri ah